Umzimba wethu uvezwa nsuku zonke ukuze ukhululeke ama-radicals - ama-athomu noma ama-molecule, okwenza izenzo zingabangela imiphumela embi kakhulu. Izinto eziholela ekubukeni kwazo zihluke kakhulu: ukukhanya kwelanga noma i-X-ray, umoya ongcolile ngenxa yegwayi noma ukukhishwa kwezimoto, futhi okungenani - ukungondleki. Kodwa ukuze uqonde ukuthi ungavikela kanjani umzimba wakho kukho konke lokhu futhi ugcine ukulinganisela okunempilo, udinga ukuqonda incazelo ephelele yomqondo wama-antioxidants.
Ama-radicals amahhala avame ukuvela emzimbeni wethu, kanti nakuba yilowo nalowo engxenyeni encane yenkinga, ngokuqoqwa okukhulu angabangela ukuhlukumezeka, imiphumela engaphendukiyo. Lezi zinhlayiya ziholela ekulimaleni kwamangqamuzana eseli we-molecule ye-DNA, eba esinye sezimbangela ezinkulu zokuguga kwe-cell. Ukutholakala kwama-radicals mahhala kuholela ekuthuthukiseni kwe-pulmonary, ye-cardiovascular and ofcological diseases. Kucatshangwa ukuthi iseli ngalinye likhiqiza cishe ama-radicals amahhala angu-10 ngosuku. Futhi ama-antioxidants abizwa ukulwa nabo. Abantu abasebenzisa ngokujulile umqondo wama-antioxidants, imenyu yabo ihlanganisa imikhiqizo ecebile kulezi zinto, banokuphikisa okuhle, okungukuthi ukusetshenziswa kwalezi zokudla okunomsoco futhi okunomsoco kuyindlela engcono yokuvimbela umthelela wezinhlayiya eziyingozi.
I-antioxidants - iyini?
Ziyiqembu lezici ezivikela amangqamuzana omuntu emiphumeleni emibi ye-radicals yamahhala, engasenza ngcono kakhulu isimiso sethu somzimba. Kusuka endaweni yokubuka amakhemikhali, i-antioxidant yinoma iyiphi into evimbela uketshezi nokuthuthukiswa kwama-radicals wamahhala, okuvimbela ukuba bangaboni. Ngomqondo obanzi, i-antioxidants yizinto ezingabambezela noma ezivimbela ukulimala okwenziwe nge-oxidative ezakhiweni eziphilayo.
Umzimba wethu unamakhemikhali ahlanzekile we-antioxidants coenzyme Q10 ne-glutathione, elwa ngokuphumelelayo nemiphumela yama-radicals yamahhala. Ngeshwa, uma sekudala, ukwamukelwa kokudla okufanayo nokungafaneleki kwandisa njalo amathuba okubheka izinto ezimbi (ukubhema, uketshezi, ukungcola kwamakhemikhali kokudla namanzi), inani kanye nokusebenza kwama-antioxidants kunciphisa ngokweqile ngokulingana nomsebenzi wama-radicals.
Lokhu kusho into eyodwa kuphela: ngokukhula kweminyaka, ukusetshenziswa kokudla okunevithamini C no-E, i-beta-carotene ne-selenium kuyadingeka - lawa amanye ama-antioxidants angcono kakhulu angagcini kuphela ama-radicals amahhala, kodwa futhi akhuthaza umzimba we-body, ukuqinisa ukuvikelwa kwawo kuma-virus, amabhaktheriya kanye nezinto ezinobuthi.
Indlela yokusebenza yama-antioxidants
Izindlela zokuzivikela zomzimba zingahlukaniswa ngamazinga amathathu:
Izinga lokuqala lihlanganisa zonke izici ezivimbela ukwakheka kwama-radicals mahhala. Incazelo yabo ephelele izwakala njengama-antioxidants okuvikelayo - transferrin, ferritin, hemosiderin, lactoferin, albin.
Izinga lesibili nelisisekelo lokuvikelwa emzimbeni liqinisekisa ukulandelela nokususwa kwama-radicals amahhala asetshenziswe kakade noma ama-radicals ane-reactivity ephansi. Lokhu kwenziwa ngosizo lwe-antioxidants enzymatic - catalase, glutathione peroxidase kanye ne-glutathione reductase.
Izinga lesithathu lokuvikelwa lihlukaniswa yi-enzyme ezuzwe kancane emonakalweni ngama-radicals mahhala. Umsebenzi onjalo uvela kuma-phospholipase A2, amanye ama-enzyme e-proteolytic, ama-enzyme ekunciphiseni i-DNA, njll.
Uhlu lwe-antioxidants ethandwa kakhulu:
6. I-Alpha lipoic acid
14. I-algae eluhlaza okwesibhakabhaka
18. Iwayini elibomvu
Ucwaningo lwamuva lubonisa ukuthi umphumela wabo omuhle ukwanda uma kusetshenziswa amachiza amaningi e-antioxidants ndawonye. Kulo xhumano, umbuzo uphakama: "Kungenzeka yini ukudala i-superantioxidant evikela ngokuphumelelayo wonke amaseli kusuka ekuguquleni?" Futhi impendulo kungenzeka ibe yinto enhle. Lokhu kungenxa yokuthi zonke lezi zithako zingahlanganiswa ngokufanele ukudala umkhiqizo ozosiza kakhulu uma:
ukubhema okusebenzayo noma okungapheli;
umthelela wansuku zonke wokungcola komoya, ukukhishwa kwezimoto, ukusebenza endaweni enomqondo ophezulu wezinto ezinobuthi, njll;
imiphumela emibi yokubambisana;
ingozi eyengeziwe yokuthuthukisa izifo zenhliziyo, izifo zesibindi, izifo ezishintshayo kanye nezifo ezithathelwanayo;
ku-trimester yokuqala yokukhulelwa ukuze kuncishiswe ingozi yokuhlukunyezwa kokubeletha nokungahambi kahle;
ukuvimbela bonke abangathanda ukunciphisa inqubo yokuguga nokugcina umzimba wabo ngendlela enempilo ngisho nangemva kokufinyelela eminyakeni engama-60;
silondoloze isikhumba esincane, esinamandla, esibonakalayo nesibheke kangcono futhi sinciphisa imibimbi.
Ngamunye wethu uyazi ukuthi ukusetshenziswa kokudla okunjengama-blueberries, i-broccoli, amahalananda, izithelo ze-citrus, kanye nokusetshenziswa kwekhofi kanye netiyi oluhlaza kuyisici esiwusizo kakhulu futhi esiwusizo kakhulu ekudleni okunempilo. Kodwa akekho kithi osola ukuthi lokhu ngezinye izikhathi kudala ingozi engozini empilweni yomzimba. Lokhu akuhambisani ngaso sonke isikhathi nencazelo ephelele yomqondo wama-antioxidants, kodwa lokhu sekuyiqiniso okweqiniso.
Nakuba ukutholakala kwama-antioxidants ekudleni nokuphuza okuhlukahlukene kubhekwa njengokuwusizo, isifundo sabososayensi baseMelika be-University of Kansas sibonisa ukuthi ukusetshenziswa kwansuku zonke kokudla okunamandla kuma-antioxidants (isb., I-vitamin C no-E) kungabangela ushintsho oluyingozi futhi olungathandeki kumaseli angama-somatic omzimba womuntu ukwandisa kakhulu ingozi yezifo kanye nomdlavuza.
Ososayensi baye baqaphela ukuthi ukwanda kwe-oksijeni kumaseli kuthinta kanjani ukusebenza kwabo. Ngokombono wabo, ibhalansi ye-antioxidant ibucayi kakhulu kanti ngisho nokunciphisa noma ukunyuka okuncane emthamo wezinto ezibonakalayo kungaba nemiphumela emibi nokubaluleka. Ochwepheshe baseMelika baphikisa ukuthi ukunqwabelana ngokweqile kwama-antioxidants kungalimaza kuphela. Lokhu ekuqaleni kungase kubonakale kungenangqondo, kodwa kuyiqiniso. Inani eliningi ngokwezinto ezinamakhemikhali e-antioxidant kuncishisa ikhono lomzimba lokudlulisa oksijini kumaseli futhi lokhu kwephula izindlela zokusayina ezibalulekile emzimbeni womuntu okudingekayo ukuze isebenze ngokujwayelekile.
Abalobi bokuhlolwa bakholelwa ukuthi ukuphakama okukhulu kwama-antioxidants kuthinta umsebenzi wezinyunyana ezithile ezithintekayo ekuqondiseni amaphutha ku-chain DNA eyenzeka phakathi nokuhlukaniswa kweseli. Ucwaningo luqinisekisa ukuthi izibalo ezinkulu ze-antioxidants zingabangela amaphutha kumakhemikhali wezakhi zeseli futhi zenze ushintsho oluhlukile. Ngokwengxenye yayo, amaphutha kwizinto ze-DNA ayimfuneko yokuthuthukiswa kwezidumbu, kanye nezinombolo zamanqamu.
Ngakho-ke, ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa izithako zokudla eziqukethe i-antioxidants, kudingeka uqiniseke ukuthi umzimba udinga ngempela. Futhi lokhu kusho ukuthi kuyimpoqo hhayi kuphela ukubonisana nochwepheshe, kodwa futhi ukuqhuba uchungechunge lwezihlalutyi kanye nezifundo. Ngakolunye uhlangothi, ukuntuleka kwama-antioxidants athile kuyimbangela enkulu yokuthuthukiswa kwezifo ezingavamile nezifo ezithathelwanayo, ukuguga ngaphambi kwesikhathi, ukwanda okuqhubekayo ngesilinganiso sokuthuthukiswa kwezifo zamehlo ezonakele, njenge-cataracts. Lokhu kusho ukuthi kuyadingeka ukuthola ibhalansi elungile ukuze kube yinto enengqondo kakhulu futhi engaguquki ekusetshenzisweni kwama-antioxidants. Bahlanganiswe nendlela yokuphila enempilo kuzokuvumela ukuthi ube nesimo esihle ngisho nasebudala.
Inani lamandla wemikhiqizo yefulawa
Ukuzila okumile: izindlela zokwelapha eziyisisekelo
I-caviar ebomvu nezindawo zayo
Ukudla okunempilo e-hypertension
Ingabe iziphuzo zamandla ziyingozi?
Izakhiwo eziwusizo ze-bran
I-Prince ne-macho ebhodleleni elilodwa, noma indlela yokukhetha i-suti yomkhwenyana
Indlela yokukhetha iwayini elifanele
Ukuphila komuntu siqu kaFilip Kirkorov: yiziphi izimfihlakalo ezifihliwe yinkosi yama-pop
Uhlobo lwezinsikazi nabesilisa abakwebayo
Kungaba khona ubungane phakathi komfana nentombazane?
Isaladi kusuka ama-oranges anesipuni
Isikhathi seSikole: isitayela se-autumn-2016
Iresiphi ye-dessert ehlobo elula: i-apula iyaphela
Amaqebelengwane angama-chocolate nge-glaze eluhlaza
Izakhiwo eziwusizo zebhotela
Inkohliso enonya: inethiwekhi ithole isithombe se-Evgenia Feofilaktova, okungekho isici somuntu omncane